हार्दिक बधाई ! डा.सन्दुक रुइतसहित ३ जना नेत्ररोग विशेषज्ञ यति ठुलो अवार्डबाट सम्मानित । – Nepal Online Khabar
हार्दिक बधाई ! डा.सन्दुक रुइतसहित ३ जना नेत्ररोग विशेषज्ञ यति ठुलो अवार्डबाट सम्मानित ।
April 9, 2021 561
काठमाडौं : ‘भिजन एक्सिलेन्स अवार्ड २०२०’ बाट डा. सन्दुक रुइतसहित ३ जना नेत्र’रोग विशेषज्ञ सम्मानित हुनुभएको छ ।
साथै,नेपाल आँखा अस्पताल तथा नेपाल नेत्रज्यो’ति संघका संस्थापक प्रा.डा .रामप्रसाद पोखरेल र नेपाल आँखा अस्पतालका अध्यक्ष डा.गोपालप्रसाद पोखरेलले पनि भिजन एक्सि’लेन्स अवार्ड २०२० प्राप्त गर्नुभएको छ ।
तिलगंगा अस्पतालको संस्थापक रहनुभएका डा. रुइत मो’तिबिन्दु श’ल्यक्रि’याका लागि प्रख्या’त हुनुहुन्छ । डा. रुइत म्याग्सेसे पुरस्कार बिजेतासमेत हुनुहुन्छ । डा.रुइतले हजारौँ नेपाली र विदेशी नागरिकको गु’मेको दृ’ष्टि फ’र्काउनुभएको छ ।
उहाँले दृष्टि फर्काउने अभियान दु’र्गमसम्म पु¥र्याउनुभएको छ । डा. रुइतलाई यस वर्षको मानपदवी ‘सुप्रसि’द्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम)’ पदकबाट वि’भूषित गरिदैछ ।
यसैगरी आँखा अस्पतालका अध्यक्ष डा.पोखरेलले नेपालको आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु्या¥उनुभएको छ भने नेत्रज्यो’ति संघका संस्थापक डा. पोखरेल ‘आँखा बा’ को रुपमा चिनिनुहन्छ । -गुन्जन मिडिया
बिएफआइएनले साधारण शेयर बि’क्री गर्ने !
काठमाडौं : साधारण शेयर बिक्री गर्ने क्रममा बैंकिङ फाइनान्स एण्ड इन्स्यो’रेन्स इ’न्स्टिच्युट अफ नेपाल लिमिटेड (बिएफ आइएन) पनि जोडिने भएको छ । सो संस्थाले अधिकतम ५५ हजार कित्ता साधारण शेयर सर्व’साधारणलाई बि’क्री गर्ने भएको छ ।
सम्झौ’तापत्रमा बिएफआइएनका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डा विनोद आत्रेय र एनआइसी एशिया क्या’पिट लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेन्द्र रायमाझीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
बिएफआइएनले आज एनआइसी एशिया क्या’पिट लिमिटेडलाई शेयर निष्का’सन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । बिक्री प्रब’न्धकको नि’युक्तिसँगै शेयर बि’क्री गर्ने घो’षणा गरिएको हो । कम्पनीले रु १०० अङ्कि’त मूल्यमा ५५ हजार कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्न लागिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
Prevहरियाे साग र च्याउ खानुका यस्ता छन अचम्मैको फाइदाहरु ।
Nextभारतसँग सीमा जोडिएको छा’ङ्गरू गाउँ ६ महिना सुनसान, एक्लै चौ’कीदारी गर्छन् राइसिंह !
जनार्दन शर्मा मन्त्री बन्ने सुची बाट यसकारण हटेका रहेछन्…हेर्नुहोस् ।
प्रधानन्यायधिस पदबाट राजीनामा दिनुहोस् : रबिन्द्र मिश्र…हेर्नुहोस् ।